भिटामिनले भरिपूर्ण फल : गर्मीमा काँक्रो खानुको फाईदै फाईदा - ज्ञानविज्ञान
काँक्रोको वनस्पति नाम कुकुमिस साटिभस हो। यो कुकुरविटासि परिवारमा पर्दछ। काँक्रोको उत्पति नेपाल र भारतको दक्षिण पूर्वी भागमा भएको मानिन्छ। अन्य लहरे बाली जस्तै काँक्रोले पनि धेरै गर्मी र धेरै जाडो सहन सक्दैन। यसलाई लामो समयसम्म न्यानो तापक्रमको आवश्यक पर्दछ।
काँक्रो तराईमा माघ, फागुनमा रोपिन्छ भने बेमौसमी खेतीका लागि पुसमा बेर्ना तयार गरी रोपिन गर्दछ। मध्य पहाडमा फागुन, चैतमा रोपिन्छ भने उच्च पहाडमा वैशाखदेखि जेठसम्म काँक्रो रोपिने गर्दछ। यो धेरै जातका हुन्छन्। तीमध्ये कुनै ४५ दिन भित्र र कुनै ६०-६५ दिन भित्र फल्दछ। काँक्रो १२ सेमिदेखि ४५ सेमिसम्म लामो र ५ देखि १५ सेमिसम्म गोलाइ भएको पाइन्छ।
काँक्रोको बोट कम लहरादेखि बढी लहरा जाने र त्यस्तै हाँगाहरू पनि कम र धेरै हुने पाउँदछन्। पातको फेदबाट त्यान्द्राहरू निस्कन्छन्। यस्को जरा लामो गहिरोसम्म जाने हुन्छ र एउटै बोटमा भाले र पोथी फूलहरू हुन्छन्। यसलाइ राम्ररी थाँक्रा दिन सकेमा मात्र राम्ररी फल्छ। साथै काँक्रोको पहिलो मुन्टा चुडिदिएमा धेरै लहरा निस्कन्छ र बढी फल लाग्दछ।
दक्षिण भारतमा पाईने दोसाकाईलाईगोल काँक्रो भनिन्छ | यो स्वाद र रूपमा काक्रो जस्तो हुन्छ तर आकारमा गोलाकार हुन्छ | यसको प्रयोग फलफुलको रूपमा भन्दा त‍रकारीमा बढि हुन्छ|
सय ग्राम काँक्रोमा पाइने पौष्टिक तत्त्व :
काँक्रा एक फाइदा अनेक :
गर्मीले मुख सुकेको बेला काँक्रा खान पाउँदा कसलाई पनि आनन्द आउँदैन र ? खाना खाँदा सलादको रुपमा काँक्रा चपाउन पाउँदा अझै आनन्द आउँछ । काँक्रा खानमा जति स्वादिलो हुन्छ यो उतिधेरै लाभकारी पनि हुन्छ । काँक्राको नियमित भोजन स्वास्थ्यका लागि निकै लाभदायी रहेको विज्ञहरु बताउँछन् ।
काँक्रामा पर्याप्त मात्रामा पानी पाइन्छ । काँक्रामा ९६ प्रतिशत पानी हुने भएकाले यसको सेवनले सरीरमा पानीको कमी हुन दिँदैन । साथै काँक्रामा भिटामिन बी, भिटामिन सी का साथै पोटासियम, फस्फोरस तथा आइरन जस्ता तत्व पनि पर्याप्त मात्रामा पाइन्छ ।
काँक्राको नियमित सेवनले कतिपय रोगबाट पनि जोगाउँछ । काँक्राको नियमित भोजनले कब्जियत, पेटमा ग्यास भरिने, अम्लपना जस्ता समस्या कम गर्न सहयोग पूराउनुका साथै मोटोपनाबाट पीडितहरुका लागि समेत लाभप्रद हुन्छ । काँक्रा काटेर त्यसमा नुन तथा कागतीको रस मिलाएर खाँदा त्यसले खाना पचाउन मद्दत गर्छ ।
– काँक्रालाई काटेर पातलो पत्र -स्लाइस) बनाएर अनुहारमा लगाउँदा छालालाई स्वस्थ बनाउन मद्दत गर्छ । यसले अनुहारको छालालाई चमकदार बनाउँछ ।
– पोलेको ठाउँमा काँक्राको पातलो टुक्रा दल्नाले दुखाइ कम हुनुका साथै फोका उठ्नबाट बचाउँछ ।
– आँखा सुन्निएको छ भने काँक्राको गोलाकार टुक्रा आँखामाथि केहीबेर राख्नुहोस्, नियमित यसो गर्दा सुन्निएको आँखा ठीक हुन्छ ।
– महिनावारीको गडबडी हुने महिलाहरुका लागि पनि काँक्राको सेवन लाभदायी हुन्छ । काँक्रालाई टुक्रा बनाएर त्यसमा दही मिसाउनुहोस् अनि त्यसमा पदिना, बिरे नुन, मरिच , जिरा तथा हिंग मिलाएर खानुहोस् त्यसले महिनावारीलाई नियमित बनाउनुका साथै महिनावारीका बेला हुने दुखाइ पनि कम गर्छ ।
– काँक्राको रसमा कागतीको रस मिलाएर अनुहारमा लगाउनाले अनुहार चमकदार हुन्छ ।
– काँक्रामा फाइबर पनि पर्याप्त हुने हुनाले यसले कब्जियतको समस्या दूर गरिदिन्छ ।
– काँक्राको रसमा गाजरको रस मिलाएर पिउनाले कपाल सुन्दर हुनुका साथै कपाल चम्किलो र लामो हुने विज्ञहरु बताउँछन् ।
– काँक्राको नियमित सेवनले सरीरमा इन्सुलिनको मात्रा सन्तुलित राख्ने हुनाले यो मधुमेहका रोगीहरुका लागि उत्तम हुन्छ ।
– काँक्राले सरीरमा कोलेस्टेरोलको मात्रा सन्तुलित गर्न मद्दत गर्छ ।
काँक्रोका केहि फाइका यस्ता छन्
१. यसको सेवनका कारण क्यान्सर जस्तो खतरा हुनबाट बचाउँछ ।
२. महिनावारी हुँदा देखिन सक्ने समस्याबाट समाधान पाउन सकिन्छ ।
३. मधुमेह वा उच्चरक्तचाप रोग भएका ब्यक्तिहरुका लागि फलदायी हुन्छ ।
४.यसमा पानीको मात्रा बढी हुने भएकाले शरीरको तौल घटाउन मद्दत गर्छ । यसमा फाइबर बढी भएकाले खाना पचाउन मद्दत गर्छ
५. काँक्रोलाई अनुहारमा लगाउँदा शितला मिल्ने हुन्छ । र आखाँमा लगाउँदा आँखालाई चिसो प्रदान गरि राख्छ र आँखा पोल्ने समस्याबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ ।
खानालाई स्वास्थ्यबर्धक बनाउने हो भने त्यसमा काक्रोको समावेशलाई अनिवार्य मानिन्छ । हुन त परम्परागत रुपमै पनि संसारभर कांक्रो पोषकतत्वको एक अंगको रुपमा रहदै आएको छ । विभिन्न अध्ययनले पनि कांक्रोमा निम्न तत्व हुने पुष्टि गरिसकेका छन् । काक्रोमा भएको एन्टीडाएबेटिक र एन्टी अक्सिडेन्ट तत्वले छाला सम्बन्धी समस्याबाट बचाउनुको साथै कब्जियतको समस्या पनि हल गर्छ ।
६. दुखाई कम गर्छ ‘जर्नल अफ योङ फार्मासिष्ट’मा प्रकाशित एक अनुशन्धान रिर्पोट अनुसार कांक्रोलाई परम्परागत रुपमा टाउको दुखाई क मगर्ने औषधिको रुपमा प्रयोग गरिन्थ्यो । यस्तै कांक्रो बिजले शरीरलाई चिस्याउने र कांक्रो सेवनबाट मुत्रजन्य समस्या हट्ने सो रिर्पोटमा उल्लेख छ ।
Don't Miss it के खुसार्नीको पनि एक्स्पाईरी डेट हुन्छ ? थाहापाउनुहोस्
Up Next मासु खानु स्वास्थ्याका लागी किन खतरनाक छ ? जानिराख्नुहोस